DOWNLOAD AGBA AGBA PRO N'EFU NA KỌMPUTA GỊ - MMEMME NYOCHA - 2019
Onye ọ bụla nwere ike ịdọrọ ihe oyiyi na Paint ma ọ bụ nchịkwa ọzọ, ma ọ bụghị ime ka ọ kwaga. Mana ọbụna ọrụ dị mgbagwoju anya dị mfe ma ọ bụrụ na enwere ngwanrọ pụrụ iche. Maka ịmepụta animations ma ọ bụ mmegharị ihe nkiri nke ọnụ ọgụgụ, Pivot Animator zuru oke.
Ngwaọrụ Pivot bụ ngwá ọrụ nke nwere ike ịme ka ọ bụrụ ihe oyiyi ọ bụla ị nwere na kọmputa gị (ma na-agbaso ihe omume nke usoro ihe omume). Ekele maka onye nchịkọta ahụ wuru nwere ike ịmepụta sprite gị ma jiri ya dị ka ọnụ ọgụgụ.
Window a mepee mgbe ịmalite usoro ihe omume ahụ, ọ bụ otu n'ime igodo ahụ, ebe ọ bụ na ebe a ka e kere ya. A na-emegharị ihe site na-agbanwe ọnọdụ nke "ihe na-acha uhie uhie", nke dị na gbagọrọ agbagọ, na ọnụ ọgụgụ dum, yana ịgbakwunye okpokoro ọhụrụ.
Mgbe ị na-emepụta animation, ị ga-ahụ otú ọ ga-esi ele anya ma ọ bụrụ na echekwa ya dịka ihe ngosi. Ebe ị nwere ike ezipụta ọsọ ọsọ.
Usoro ihe omume ahụ nwere ike ịgbanwe nzụlite gị.
Enwere ike itinye ọnụ ọgụgụ dị iche iche na ntụrụndụ gị.
Na-akwado ndabere na sprites
Ka usoro ihe omume ahụ wee hụ ihe oyiyi dị mkpa maka ndabere ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ, ị ga-ebu ụzọ tinye ha site na ngalaba ndị dị na menu. Ịnwekwara ike ibudata ọdịdị dị njikere.
Ekele maka nchịkọta akụkọ ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ihe ị na-eme (sprites) maka ihe nkiri, nke a kpaara naanị site n'echiche.
Na ọnọdụ a, akụkụ ọ bụla nke ihe a na-agbanwe agbanwe maka ọchịchọ gị.
Ekele maka ihe ndị a, ị nwere ike ịgbanwe ọdịdị ya, kwado ya, detuo ya, jikọta ya na ọdịdị ọzọ, ma ọ bụ gbanwee agba ya. Na ekele maka akwụkwọ mpịakọta ahụ, ị ​​nwere ike ịhazigharị nghọta nke ọdịdị ahụ.
Ọ bụ asụsụ Russian
Enwere obere ohere diski ike
Na-eru nso ma na-arụ ọrụ
Ọ bụrụ na ịchọrọ foto gị yana ihe odide niile ga-adị ndụ na ya, mgbe ahụ Pivot Animator ga-enyere gị aka n'ezie, mana ọ na-esiri gị ike nyochaa ọnụọgụ ndị ọzọ, na n'ọtụtụ ọnọdụ ọ dịghị mkpa. Ị nwere ike ịme mma ma ọ bụ na-egwu ọchị na ya, ma maka omume ndị ka njọ, ọ gaghị adabara, dịka ọ ga-ewe oge iji mejuputa nnukwu ọrụ.
Ibudata onye na-eme ihe nkiri maka n'efu
Mfe gif animator CrazyTalk Animator Anime studio pro DP Animation Maker
Pivot Animator bụ ngwa dị mfe nke ị nwere ike ịgbanwu foto na ihe odide na ya ka ọ bụrụ ihe ngosi.
Onye Mmepụta: Peter Bone